Mashoko Akanaka Kuvanhu Vose, Mashoko Akanaka NezvaJesu
Mashoko Akanaka Kuvanhu Vose
Kumutswa kwaJesu kwakaita kuti vadzidzi vake vashingaire uye vave nechivimbo. Somuenzaniso, muapostora Pauro akatenderera muAsia Minor yose nemunharaunda yeMediterranean, achitanga ungano uye achisimbisa vaKristu kuti varwisane netsika dzakaipa uye kupikiswa kweutsinye. Pasinei zvapo nezvipingamupinyi izvi, vanhu vakawanda vakava vaKristu.
Pauro pachake akaiswa mujeri. Asi ari mujeri kudaro, akanyora tsamba dzokukurudzira uye dzokupa mazano kuungano dzechiKristu. Akatonyevera nezvengozi yakakura yevanhu vaizopandukira chokwadi. Achitungamirirwa nemudzimu mutsvene waMwari, Pauro akafanoona kuti “mhumhi dzinodzvinyirira” dzaitaura “zvinhu zvisina kururama” dzaizopinda pakati pavo, ‘dzichitsausa vadzidzi kuti vadzitevere.’—Mabasa 20:29, 30.
Pakazosvika 100 C.E., kupandukira chokwadi uku kwakanga kwatotanga. Panenge panguva iyi, muapostora Johani akaratidzwa Zvakazarurwa naJesu akanga amutswa, izvo zvairatidza zvinhu zvaizouya. Sezvakazonyorwa naJohani, hapana vavengi kana vadzidzisi venhema vaizotadzisa Mwari kuita chinangwa chake chepakutanga nokuda kwenyika nevanhu. “Marudzi ose nemadzinza nendimi nevanhu” achanzwa mashoko akanaka eUmambo hwaMwari. (Zvakazarurwa 14:6) Nyika ino ichavazve Paradhiso, uye munhu wese anoda kuita kuda kwaMwari achagara mairi!
Aya unoaona se“mashoko akanaka” here? Kana uchidaro, dzidza zvakawanda nezvemashoko aMwari kuvanhu ari muBhaibheri uye kuti angakubatsira sei iye zvino uye mune remangwana.
Unogona kuverenga Bhaibheri paIndaneti pawww.jw.org. Panzvimbo iyi, unogona kuverenga mabhurocha anoti, Bhaibheri Rinombotaura Nezvei? uye Mashoko Akanaka Anobva Kuna Mwari! kana kuti bhuku rinonzi Bhaibheri Rinombodzidzisei Chaizvo? pamwe chete nemamwe mabhuku anotsanangura kuti nei tingavimba neBhaibheri uye kuti tingashandisa sei mazano aro semunhu mumwe nemumwe uye semhuri. Kana kuti kumbira mumwe weZvapupu zvaJehovha kuti akupe mashoko akawanda.
—Inobva muna Mabasa, VaEfeso, VaFiripi, VaKorose, Firimoni, 1 Johani, Zvakazarurwa.
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Mashoko Akanaka Kuvanhu Vose